अष्ट्रेलिया पुगेको २ बर्षमा नै रमिलाले संसार छो’डिन , परिवार शो’कमा ! - News20 Media
February 18, 2020 February 18, 2020 N20LeaveaComment on अष्ट्रेलिया पुगेको २ बर्षमा नै रमिलाले संसार छो’डिन , परिवार शो’कमा !
काठमान्डौ , अष्ट्रेलिया पुगेको २ बर्षमा नै ललितपुर साना गाउँकी रमिला मर्हजनको मृ’त्यु भएको हो । उनी अध्ययनका लागि २ वर्ष अघि मात्रै अष्ट्रेलिया पुगेकी थिइन् । श्रोतका अनुसार अष्ट्रेलिया पुगेपछि रमिलाई ब्रे’न ट्यु’मरको स’मस्या देखिएको थियो । त्यसको उपचार गराउने क्रममा उनको मृ’त्यु भएको बताइएको छ।
श्रीमान संजय महर्जनसँगै अष्ट्रेलियामा रहेकी रमिलाको दा’हसंस्कार अष्ट्रेलियामै सोमबार गरिएको छ । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका साना गाउँमा रहेको अनन्त इङ्गलिस स्कूलबाट एसएलसी गरेकी रमिला बिबिएस स’केर उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया गएकी थिइन् । उनको बिहे २ वर्ष अघिमात्र भएको थियो ।उनको मृ’त्युको खबरले म’र्माहत भएको भन्दै अनन्त अंगेजी विद्यालयका प्रिन्सीपल गोपाल प्रसाद घिमीरेले दुः’ख व्यक्त गरेका छन् ।
‘हाल अष्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा अध्ययनका क्रममा रहेकी अनन्त इङ्गलिस स्कूलको २०६४ व्याचकी होनहार छात्रा रमिला महर्जनको अ’सामयिक नि’धनप्रति हा’र्दिक र श्र’द्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । रमिलाको नि’धनबाट पत्नी वि’योगको पी’डामा परेका सोही व्याचका यसै विद्यालयका छात्र सञ्जय महर्जन एवम् दुबै परिवारमा परेको बज्’रपातप्रति विद्यालय परिवार तथा व्यक्तिगत रूपमा म हा’र्दिक स’मवेदना व्यक्त गर्दछु ।’ प्रिन्सीपल घिमीरेले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ।
शक्ति गौचनसहित क्रिकेटका अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक थापा पुरस्कृत